အကောင်းဆုံး MT4 ပွဲစားများ - အကောင်းဆုံး MT4 ပွဲစားများကိုဘယ်မှာရှာတွေ့မည်နည်း - ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလ
အကောင်းဆုံး MT4 ပွဲစားများ - အကောင်းဆုံး MT2021 ပွဲစားကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း
31 မတ်လ 2020 | နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 22 ဇန်နဝါရီလ 2021
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှသက်သောင့်သက်သာရှိသောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်၊ ရောင်းရန်နှင့်ကုန်သွယ်ရန်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် MetaTrader4သို့မဟုတ် MT4 ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် MT4 ဟာအွန်လိုင်းပွဲစားများရာပေါင်းများစွာအသုံးပြုတဲ့အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြေခံနည်းပညာသည်သင်၏အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်၊ အနည်းဆုံး၎င်းမှာ microseconds တွင်အမိန့်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ MT4 နှင့်ပတ်သက်သည့်အကောင်းဆုံးအရာများအနက်တစ်ခုမှာသင်၏ forex နှစ်ခုလုံးကိုသင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်ဖြစ်သည် နှင့် CFDs - နောက်ပိုင်းမှာသင့်အားထောင်နှင့်ချီသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုသင့်အားလက်လှမ်းမီစေသည်။
ထို့ကြောင့် MetaTrader4system ကိုထောက်ပံ့သောအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများကိုသင်ရှာဖွေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ။4၏အကောင်းဆုံး MT2021 ပွဲစားများ.
မှတ်ချက် - သင်၏အဓိက ဦး စားပေးသည် MT4 ကိုထောက်ပံ့သောပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းသင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်း မှလွဲ၍ အခြားအချက်များကိုလည်းလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်ကုန်သွယ်ခ၊ စည်းမျဉ်း၊ ဖောက်သည်အထောက်အပံ့နှင့်ငွေပေးချေမှုတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။
MetaTrader4(MT4) ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံဖြစ်သော MetaTrader4သည်ပွဲစားများမှပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းသည်ခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင်၏အမှာစာများကိုမိုက်ခရိုစက္ကန့်ရှိအခြားကုန်သည်များနှင့်လိုက်ဖက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
MT4 ကိုပွဲစားများကပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်ပလက်ဖောင်းများတည်ဆောက်ရန်မလိုဘဲကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ယင်းအစားပွဲစားများသည် MT4 - MetaQuotes ဆော့ဝဲလ်မှ၎င်းကိုလိုင်စင်ပေးရန်သာလိုအပ်သည်။ MT4 သည်ပွဲစားများအတွက်ထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် forex နှင့် CFD နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် MT4 ပွဲစားများသည်သင့်အားငွေကြေးအတွဲ ၁၀၀ ကျော်ကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကအခြားထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုလည်းသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ETFs နှင့် cryptocurrencies မှအရာအားလုံးပါဝင်သည်။
MT4 သည်လူသစ်ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ Layout တစ်ခုလုံးသည်သန့်ရှင်း။ ကြည်လင်ပြတ်သားရုံသာမကသင်၏ကိုယ်ပိုင်နှစ်သက်မှုများကိုထင်ဟပ်စေရန်၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီသင်သည်သင်၏ set up ရန်ခွင့်ပြုပါတယ် တစ်ရက်ကုန်သွယ် သင်မထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းမျက်နှာပြင်။
ပွဲစားများကိုစီးပွားဖြစ်ပလက်ဖောင်းမဆောက်ဘဲကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြန့်ဝေရန်ခွင့်ပြုသည်
၂၄/၇ အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုကိုပံ့ပိုးသည်
Forex နှင့် CFD နှစ်ခုစလုံးကိုအရောင်းအဝယ်ပြုသည်
Windows, Linux, Mac၊ Android နှင့် iOS တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
MT4 ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဆူညံသံကိုသင်ကြားခဲ့ရသော်လည်းကုန်သည်များနှင့်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလူကြိုက်များအောင်လုပ်သည်ကိုသင်မသေချာပါကအောက်ပါအချက်အလက်များကိုသေချာစစ်ဆေးပါ -
ပထမဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးမှာ MT4 ပွဲစားများကသင့်အား Forex နှင့် CFDs များကိုစင်မြင့်တစ်ခုမှကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သီးခြားပွဲစားများတွင်ကုန်သွယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီအစား၊ သင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ access ကိုရရှိနိုင်သည် CFD ကုန်သွယ် တူရိယာအဖြစ်၏အမှိုက်ပုံ Forex ကုန်သွယ် အားလုံးအတွက် - တစ်ခုတည်း MT4 ပွဲစားနှင့်အတူ။
✔️ Analytical Functions များ
သင်နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်းချိုင့်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင် MT4 သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်အွန်လိုင်းကော်လံများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ထို့နောက်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုမည်သို့ဖြစ်ပျက်လာသည်နှင့်အမျှတုံ့ပြန်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
အကယ်၍ သင်သည်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုနှစ်သက်သောကုန်သည်အမျိုးအစားဖြစ်လျှင် MT4 ကိုသင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း ၃၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများကိုသင်တပ်ဆင်ထားရလိမ့်မည် - ထိုခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်ဤပိုင်ဆိုင်မှု၏အနာဂတ် ဦး တည်ရာကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် MT4 ပွဲစားများကိုအသုံးပြုလိုစိတ်ရှိပါက - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအတွက်၊ ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ MT4 အထောက်အပံ့ပြုသည့်အရစ်ကျအကောင့်များအားအချက်အချာတစ်ခုမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏စိတ်ကြိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်ချိန်ညှိချက်များကိုသင်၏ MT4 ပွဲစားသို့အသစ်တင်သွင်းလိုပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
MT4 သည်စားသုံးသူများမောင်းနှင်သည့်စျေးကွက်ကိုလည်းထားရှိသည်။ ၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်သူများအားအလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်မှသည်အသစ်တိုးတက်လာသောနည်းပညာညွှန်းကိန်းများသို့မည်သည့်အရာကိုမဆိုရောင်းချခွင့်ပြုသည်။
MT4 ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီစျေးနှုန်းအချက်ပေးမှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် USD / USD ကိုသင်ရောင်းလိုသည်ဆိုပါစို့။ EUR / USD သည် ၁.၄၄ ခုခံနိုင်သည့်အနိမ့်အမြင့်ကိုကျော်ဖြတ်သောအခါစျေးကွက်ထဲသို့သင်အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်လိုသည်။
ယင်းကိုလုပ်သည့်အခါတွင်၎င်းအတွဲကိုကိုယ်တိုင်ရောင်းဝယ်ရန်သင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏အချက်ပြသတ်မှတ်ရန်သာလိုအပ်ပြီး MT4 ပွဲစားသည်ထိသောအခါတွင်သင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်လူသစ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်နေသေးပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုရွေးချယ်ရန်တွန့်ဆုတ်နေမည်ဆိုလျှင် MT4 copy trading feature ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ၎င်းသည်သင့်အားပံ့ပိုးသူကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးပြီး MT4 terminal သည်သူတို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်။
MT4 Demo အကောင့်
MT4 ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကောင်းဆုံးအချက်များအနက်တစ်ခုမှာသင်၏ပြည့်စုံသောသရုပ်ပြအကောင့်ကိုသင်ရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်၎င်းသည် 'စက္ကူ' ငွေဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာငါတို့စစ်ဆေးနိုင်သည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ သင့်ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများကိုမစွန့်လွှတ်မီ
တစ်ဘက်တွင် MT4 သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်းအသုံးဝင်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင့်အား အသုံးပြု၍ ရသောအပြင်အဆင်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်း။ ၎င်းတွင် stop-loss နှင့် take-profit orders များကဲ့သို့စျေးကွက်အမိန့်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းပါဝင်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာ့ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်အတွက်ပြင်ဆင်ရန် MT4 သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထိရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းခုန်လိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်သင်ငွေဆုံးရှုံးခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်သင်ယူရန်အဓိကအချက်ဖြစ်သည် - ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုအရှိဆုံးကုန်သည်များသာအောင်မြင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။
MT4 သည် desktop နှင့် mobile device များရှိ operating system အများစုနှင့်၎င်း၏ web trader platform တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုလောကတွင်စတင်နေပြီဆိုလျှင် MT4 သည်ပထမတစ်ချက်မှာစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုဖတ်ရှုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
🥇အဆင့် ၁: MT1 ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်သင်အနေဖြင့် MT4 ကိုထောက်ပံ့သောအွန်လိုင်းပွဲစားနှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်သင်သည်အခြေခံပလက်ဖောင်းအပြင်အခြားမက်ထရစ်များကိုလည်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းတွင်ပွဲစား၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ပြန့်ပွားမှု၊ ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သင့်သည်။ သင်လမ်းတစ်လျှောက်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း MT4 ပွဲစားရွေးသူ ၅ ဦး ကိုဤလမ်းညွှန်၏အောက်ဆုံးသို့ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
🥇အဆင့် ၂ - အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော MT4 ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ လွယ်ကူစေရန်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်ဤအချက်ကိုအကောင်းဆုံးအကြံပေးသည်။ သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားအခွန်အခ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာစသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အချို့ကိုသင်အစပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ပွဲစားသည်သင်၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအချို့ကိုလည်းသင်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင်လုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့်သင်၏နှစ်စဉ်လစာတို့ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင် MT4 ပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ယခင်ကသင်ဝယ်ယူခဲ့သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှု၏ပျမ်းမျှအရွယ်အစားတို့ပါဝင်သည်။
🥇အဆင့် ၃။ သင်၏အထောက်အထားကိုစစ်ဆေးပါ
ပြည်တွင်းနှင့်ဒေသတွင်းငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်သင်၏ MT4 ပွဲစားသည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို KYC (သင့်ဝယ်ယူသူအားသိရှိရန်) လုပ်ငန်းစဉ်ဟုလူသိများပြီးသင့်အားစာရွက်စာတမ်းများအချို့တင်ပို့ရန်သာလိုအပ်သည်။
သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြစ်နိုင်သည့်အစိုးရထုတ်ပေးသော ID မိတ္တူကိုဖြည့်ရမည်။ သင်၏လိပ်စာကိုအတည်ပြုရန်မကြာသေးမီကဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်၊ အသုံးအဆောင်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်အခွန်ထုတ်ပြန်ချက်မိတ္တူတစ်ခုကိုသင်တင်ပို့နိုင်သည်။
🥇အဆင့် ၄ - ရန်ပုံငွေအချို့ကိုအပ်နှံပါ
သင်၏ MT4 ပွဲစားစာရင်းကိုယခုသင်ရန်ပုံငွေလိုအပ်လိမ့်မည်။ တိကျသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်ပွဲစားများမှအကျိုးဆောင်များနှင့်ကွဲပြားသော်လည်း၎င်းတွင်အောက်ပါရွေးချယ်စရာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုပါလိမ့်မည်။
သင်၏ငွေသွင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် MT4 ကိုသင်နှစ်သက်သော platform သို့ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သည်။
🥇အဆင့် ၅: MT5 ကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
MT4 ပလက်ဖောင်းမှအကျိုးအပြည့်အဝရရန်၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာစက်ထဲသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးအကြံပေးသည်။ Windows, Mac၊ Linux တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ MT4 ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစား၏ download ကဏ္ to သို့သွားပြီးသက်ဆိုင်ရာ operating device ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပရိုဂရမ်ကိုသွင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ MT4 ပွဲစား၏အကောင့်အထောက်အထားများဖြင့်လော့အင်လုပ်နိုင်သည်။
🥇အဆင့် ၆: ရာထူးတစ်ခုကိုဖွင့်ပါ
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးရာထူးကိုဖွင့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ သင်ရွေးချယ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစား (ဥပမာ Forex ကဲ့သို့) သို့မဟုတ် GBP / USD ကဲ့သို့သောငွေကြေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ သင်ကုန်သွယ်လိုသည့်ပစ္စည်းအတွက်သင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ရှိ 'ကိရိယာများ' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက် 'NEW ORDER' ကိုနှိပ်ပါ။
သင်သည်သင်၏အမိန့် parameters တွေကိုကို set up ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထဲမှာပါဝင်လိမ့်မယ်
သင်“ ၀ ယ်” သို့မဟုတ်“ ရောင်း” အမှာစာချလိုပါသလား
သင်ကုန်သွယ်လိုသည့်ပမာဏ (ဥပမာ CFD ကန်ထရိုက်အရေအတွက်)
မည်သည့်စျေးကွက်အမှာစာကိုသင်ရောင်းလိုသည် (Stop-loss order နှင့်အမြတ်ယူရန်အမိန့်)
🥇အဆင့် ၇: သင်၏ရာထူးကိုပိတ်လိုက်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် stop-loss ကိုမတပ်ဆင်ထားပါကသို့မဟုတ်သင်ကုန်သွယ်မှုကိုကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုလျှင်၊ TERMINAL ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး TRADE နောက်မှလိုက်လုပ်ပါ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ယခုဖွင့်လှစ်ထားသောရာထူးများအားလုံးကိုမျက်စိဖြင့်မြင်လိမ့်မည်။ သင်ပိတ်လိုသည့်အမိန့်ကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်စျေးကွက်ပေါက်စျေးမှကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန် 'X' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထိပ်တန်း Forex MT4 ပွဲစားများစာရင်း - အကောင်းဆုံး ၅ ပလက်ဖောင်း ၂၀၂၀
သင် MT4 ကိုအသုံးပြုသောပွဲစားများကိုသင်ရှာဖွေမည်ဆိုလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောသုတေသနကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင် MT4 ပွဲစားသည်သင်၏တစ် ဦး ချင်းကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သင်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့ပွဲစားများသည်အလွန်တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားမှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ထူးကဲကောင်းမွန်ပြီးအချို့ကမူတူညီသော နေ့မှစ၍ ငွေထုတ်ယူနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ရန်အချိန်မရှိလျှင်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော MT5 ပွဲစားရွေးသူ ၅ ဦး ကိုဖတ်ရှုရန်သေချာပါစေ။
1. EightCap - ၂၀၀၀၀ ကျော်ကုန်ပစ္စည်းများကော်မရှင်မှကုန်သွယ်ခြင်း
EightCap သည် MT4 နှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သောအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤလူကြိုက်များသောပလက်ဖောင်းတွင်ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာ ၂၀၀ ကျော်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်နိုင်သောအကောင့်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။
အကောင့်တစ်ခုမှာ ၁ စင်းမှစတင်ပြီးပြန့်ပွားမှုများဖြင့်ကော်မရှင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ (သို့) သင်သည် 1 pips မှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတစ်ဒေါ်လာလျှင် ၃.၅ ဒေါ်လာကျသင့်သည်။ စျေးကွက်အခြေအနေအရ EightCap သည် Forex နှင့်ရှယ်ယာများမှသည်အညွှန်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအထိအရာအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
သင်သည်ဤပွဲစားကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်စတင်နိူင်ရုံတင်မကဘဲသရုပ်ပြအကောင့်စက်ရုံမှတဆင့်အခမဲ့ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီပွဲစားကို tier-one body ASIC ကထိန်းညှိသည်။
200+ ပိုင်ဆိုင်မှုကော်မရှင် - အခမဲ့ကျော်ကုန်သွယ်
အဘယ်သူမျှမ cryptocurrency ကုန်သွယ်
၅။ EuropeFX - ကြီးမားသောအဖိုးအခများနှင့်များစွာသော FX Trading Platforms
နာမတော်ကိုဖော်ပြသည်အတိုင်း, EuropeFX အထူးကု Forex ပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာနှင့်အတူပလက်ဖောင်းသည်ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ cryptocurrencies နှင့်ကုန်စည်များဖြင့် CFD များကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ သင်သည် MT4 မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် desktop ဆော့ဝဲလ် (သို့) မိုဘိုင်း / တက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ပုံမှန် web browser မှတစ်ဆင့်သင်ကုန်သွယ်လိုပါကပွဲစားသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတိပလက်ဖောင်းဖြစ်သော EuroTrader 2.0 ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အခကြေးငွေများအရ, EuropeFX အဓိကစွမ်းအပေါ် super- တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားပေးထားပါတယ်။ သင်၏ငွေသည်အချိန်တိုင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည်။ အနည်းဆုံးပွဲစားသည် CySEC မှတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စူပါ - နိမ့်ပျံ့နှံ့
ဂရိတ်ဂုဏ်သတင်းနှင့် CySEC ကလိုင်စင်ရ
ပရီမီယံအကောင့်သည်အနည်းဆုံးငွေပမာဏယူရို ၁၀၀၀ ရှိသည်